Fiparitahan'ny valanaretina :: Olona efatra voamarina fa voan’ny pesta • AoRaha
Mirongatra amin’ny faritra maro ny valanaretina pesta. Olona efatra no voamarina fa voan’ny aretina pesta atodintarina ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambodiriana, distrikan’Antanifotsy, tao anatin’ny roa herinandro. Distrika voasokajy ho mpanotrika ity aretina ity, ato anatin’ny faritra Vakinankaratra, i Antanifotsy na dia efa tamin’ny roa taona lasa aza no nisy tranga farany tany an-toerana.
Olona roa no narary sy nahitana trangan’aretina mifandraika amin’ny fisehon’ny pesta atodintarina tamin’iny herinandro iny. Voamarina fa pesta no nahazo an’ireto olona ireto, taorian’ny fitiliana. Olona roa hafa, ihany koa, no voamarina fa voan’ity aretina ity ka notsaboina tao amin’ny tobim-pahasalamana tao an-toerana tamin’ny fiandohan’ny herinandro.
Fahafatesana olona fito
Isan’ireo distrika nahitana trangana pesta ihany koa tany Ambositra. Olona maro ihany koa no fantatra fa voan’ity pesta atodintarina tany amin’ity distrika ity. Nahatratra 18 ireo tratran’io valanaretina io, hatramin’ny volana aogositra 2019. Namoy ny ainy ny fito tamin’ireo. Voalaza fa tsy tany amin’ny tobim-pahasalamana izy ireo fa tany amin’ny fiarahamonina.
“Tany amin’ny faritra manasaraka ny kaominina Ivato Afovoany sy Ambatofitorahana no tena nahitana ny valan’aretina tato ho ato. Nahitana olona voa ihany koa tany Ambalamanakana”, hoy ny loharanom-baovao any an-toerana, omaly. Efa hatramin’ny taona 2019 no nirongatra tany amin’ny distrikan’Ambositra ny valanaretina pesta. Anisan’ny nampihanaka azy tany an-toerana tsy famonjen’ny olona tobim-pahasalamana rehefa misy marary.
“Nidina tany an-toerana ny ekipan’ny minisiteran’ny Fahasalamana taorian’ny fahafantarana fa nisy trangana pesta nisesisesy tany an-toerana”, hoy ny Dr Rafalimanantsoa Armand, talen’ny Sampan-draharaha misahana ny fiparitahan’ny valanaretina eo anivon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka na ny (DVSSE), omaly.
Ankoatra ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ireo olona efatra ireo. Efa nomena fanafody hisorohana ny mety ho fisehoan’ny aretina ihany koa ny manodidina azy ireo. Misy hetsika manokana hatao koa ao amin’ny distrikan’Antanifotsy ka hamafisina manokana ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambodiriana izay efa nahitana olona tratry ny aretina io.
Fiahiana aretina Nifanotofana ny fikasana hanao fitiliana
Hosoka amin’ny Jirama Tokantrano roa tra-tehaka nangalatra herinaratra sy rano
Sehatra famoahana talenta vao :: Hitily an’ireo mpanakanto vao misondrotra ny « Libertalia »
Fiparitahan’ny valan’aretina :: Miakatra hatrany ny isan’ireo olona voan’ny tazomoka